>Burmese Regime’s Luttaw Law Book sold out on the 1st day | MoeMaKa Burmese News & Media
>Burmese Regime’s Luttaw Law Book sold out on the 1st day
January 12, 2011>
လွှတ်တော် ဥပဒေ စာအုပ်များ ပထမနေ့မှာပင် ရောင်းမလောက်
ဇန်န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၁
နအဖ စစ်အစိုးရက ယမန်နေ့နေ့ခင်းက ကြေညာခဲ့သည့် လွှတ်တော်ခေါ်ယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် နည်းဥပဒေများ ပါရှိသည့် စာအုပ် ၁၇ မျိုးကို ယနေ့စတင်ရောင်းချသော်လည်း နေ့လည်မတိုင်မီပင် ရောင်းကုန်သွားခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့က ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက် ပထမဆုံးအကြိမ်လွှတ်တော်ကို လာမည့် ဇန်န၀ါရီ ၃၁ ရက်နေ့တွင်ခေါ်ယူမည်ဟု ယမန်နေ့က နအဖ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဥပဒေ နည်းဥပဒေ ၁၇ မျိုးကိုပါ စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိမည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။
ယနေ့ထုတ် သတင်းစာများတွင် ကြေညာချက် အကျဉ်းချုပ်ကိုသာ ဖေါ်ပြထားပြီး ဥပဒေ နည်းဥပဒေများကို စာပေဗိမာန်နှင့် ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌာန လက်အောက်ရှိ စာအုပ်ဆိုင်၊ ပြန်ဆက်ရုံးများတွင် ၀ယ်ယူနိုင်သည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ စာအုပ် ၁၇ အုပ်ကို မြန်မာကျပ်ငွေ ၃ ထောင် ဖြင့် ရောင်းချသည်ဟု သိရသည်။
သို့သော် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်လမ်းရှိ စာပေဗိမာန်သို့ သွားရောက် ၀ယ်ယူသူ တဦးကပြောရာတွင် “လွှတ်တော်နည်းဥပဒေဆိုတော့ ဘာတွေပါမလဲလို့ စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ သွားဝယ်တာ၊ ရောင်းကုန်သွားပြီတဲ့။ ဒီနေ့ပဲ ထွက်တာ ဒီနေ့ကုန်သွားတယ်ဆိုတော့ ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲတော့ မသိဘူး” ဟုပြောသည်။ ရန်ကုန်မြို့ သိမ်ဖြူလမ်းရှိ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌာနမှ စာအုပ်ဆိုင်တွင်သွားရောက် ၀ယ်ယူရာတွင်လည်း ကုန်သွားပြီဖြစ်ပြီး နောက်နေ့မှ လာရန်ပြောသည်ဟု ဆိုသည်။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် စာအုပ်အလုံအလောက် မရောင်းချနိုင်သည်ကို စာအုပ်အရောင်းဆိုင် ၀န်ထမ်းများ အနေဖြင့် ပြောဆိုခြင်း မရှိဟုလည်း သွားရောက်ဝယ်ယူခဲ့သူက ပြောသည်။ စစ်အစိုးရက ဦးစီးကျင်းပခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာ ၇ ရွေးကောက်ပွဲတွင် လက်ရှိအာဏာရယူထားသည့် စစ်အစိုးရ၏ ပါတီဟု အများကနားလည်ထားကြသည့် ကြံ့ဖွံ့ပါတီ အနိုင်ရအောင် နည်းမျိုးစုံဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် ကြံ့ဖွံ့ပါတီက ၇၆ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အနိုင်ရခဲ့ပြီး ရက်၉၀ မပြည့်မီ ၁ ပတ်ခန့်အလိုတွင် လွှတ်တော်ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့မှ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်သူတဦးက ပြောရာတွင် “လွှတ်တော် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေဆိုတာ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်ကတည်းက ဒါမှမဟုတ် ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးတာနဲ့ကြေညာထားသင့်တာ၊ အခုလွှတ်တော်ခေါ်ဖို့ ၃ ပတ်အလိုမှ ကြေညာတာ မရိုးသားဘူးလို့ ကျွန်တော်တော့ နားလည်တာပဲ”
ဟုဝေဘန်ပြောဆိုသည်။ သတင်းစာဆရာတဦးက ကောက်ချက်ပေးရာတွင် “ဒီစာအုပ်တွေဟာ အစောကတည်းက ကြိုတင်ပြီး ရိုက်ထားပြီးသား ဖြစ်ပုံရတယ်။ အခုအချိန်ကိုက်ပြီးတော့ ထုတ်ရောင်းလိုက်တာနဲ့ တူတယ်။ သတင်းစာတွေထဲကနေ အချပ်ပိုတွေ ဘာတွေအဖြစ် နေ့စဉ် ထုတ်ပြန်တာမျိူးတွေ မလုပ်တော့ဘူး ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့”
ဧပြီလ ၂၃၊ လက်ပတန်း၊ မတရားဖမ်းဆီးခံ သပိတ်မှောက် ကျောင်းသားပြည်သူများ တရားရုံးထုတ်မြင်ကွင်း	တူမောင်ညို - ကျောင်းသားသပိတ်လှုပ်ရှားမှုထဲ မှ အတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာ ထုတ်ယူရေး	အောင်သဇင် - အရှုံးကို သီးစုံထောပတ်ထမင်းနဲ့ဖုံးတဲ့ မင်းအောင်လှိုင်	ကာတွန်း မောင်ရစ် - ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ - Elephant in the room	ကာတွန်း စောငို – ၂၀၁၅ကို အကြို စောငို၏ ကာတွန်းဟောင်းများ (၇)	ကာတွန်း အောင်မော် - မြင်တာနဲ့ ကြားတာ	ဇော်အောင် (မုံရွာ) - စင်ကာပူအတွက် မြန်မာ အိမ်အကူလုပ်သား ဈေးကွက်	ဆောင်းလူ - အပြာကား	ဗိုလ်ထက်မင်း - ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးရင် တပ်မတော်သားများကို ဘာကြောင့် အဓမ္မ စစ်တိုက်ခိုင်းနေရတာလဲ? နိဂုံးချူပ် အပိုင်း ၇	မောင်စွမ်းရည် - “ ကျော်ကိုကိုရေးတဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂသမိုင်း”	မိုးမခ Kindel Store
လူမှုရှုခင်း ကောက်စာများRemembering Hlwan Moe - Andrew Sway
ဖိုးစီ (ရုံးတော) - တန်ရာတန်ကြေး
Motion Magazine No 1 - မြန်မာပြည်နဲ့အတူ နယူးယောက်နဲ့ ဆန်ဖရန်မှာလည်း ဖြန့်မည် ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ် မြန်မာကျောင်းသားအသင်းက "ဒါဒို့မြေ" ဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ပြသမည်
သွေးနဲ့ စိုက်တဲ့ စပါး၊ မျက်ရည်နဲ့ချက်တဲ့ ထမင်း
ဆက်လျှောက်ဖို့ရန် လမ်းပျောက်နေဆဲ လမ်းလျှောက်နေဆဲ
မိုးမခမျက်နှာ Western Union စာအုပ်မြင် ချစ်ခင်ကြပါစေ …	MoeMaKa Monthly ဧပြီလထုတ် ထွက်ပြန်ဘီ တဲ့ ...
Maung Swan Yi (49)
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် (169)
ဇော်အောင် (မုံရွာ) (87)
Han Thit Naing (76)
Yan Naung (Bo Ta Htaung) (189)
ကာတွန်း – အောင်မော် (62)
ကာတွန်း ATH (57)
ကာတွန်း ၀င်းအောင် (4)
သမိုင်းနဲ့ အစဉ်အလာ (606)
လူများ၊ ရုပ်ပုံလွှာများ (208)
ဖြစ်ရပ်များ၊ အမှတ်တရများ (136)
Cartoon Box (1,523)
By admin ၂၀၁၅ နှစ်သစ်အတွက် အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၁ – မိုးမခလစဉ်မဂ္ဂဇင်း အခု...Read more » Recent CommentsDr. Maung Maung Gyi on သွေး(စစ်ကိုင်း) – “ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေ မပျောက်ကွယ်သင့်ပါ”ဖိုးထက် on ဖိုးထက် – ဝေးသွားတဲ့ လမ်းမကြီးဖိုးထက် on ဖိုးထက် – ဝေးသွားတဲ့ လမ်းမကြီးyannaing on ဗိုလ်ထက်မင်း – ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးရင် တပ်မတော်သားများကို ဘာကြောင့် အဓမ္မ စစ်တိုက်ခိုင်းနေရတာလဲ? ၆San Hla Gyi on ဖိုးထက် – ဝေးသွားတဲ့ လမ်းမကြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာကို အနည်းဆုံး ၁ ဒေါ်လာ လှူပြီး မိုးမခကို ကူညီပါ	မိုးမခမှာ ကြော်ငြာပါ